November 21, 2021 - Amawpyay
ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူတွေသာ ရနေတဲ့ ကောင်းကျိုးလေးများ
ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူတွေသာ ရနေတဲ့ ကောင်းကျိုးလေးများ လူတိုင်းကတော့ တူညီ မနေကြ ပါဘူး။ စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို စိတ်ညစ်နေရင်တောင်မှာ ပျော်စရာ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ် နိုင်တဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေ ပါတယ်။ ဘဝမှာ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ စိတ်ညစ်စရာ ရှိတာ စိတ်ညစ် လိုက်ပြီး ပျော်စရာ ရှိရင် လိုက်ပျော် လိုက်တတ်တဲ့ သူတွေ အများစု ကတော့ ပျော်ပျော်နေ တတ်ကြ ပါတယ်။ သူတို့တွေက အခုလို ပျော်ပျော်နေတတ် တာကြောင့် ပြန်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အခုလိုပဲ ရှိနေပါတယ်။ (၁) စိတ်ချမ်းသာရတယ် သူတို့တွေကတော့ ပျော်စရာရှိတာကို လိုက်ပျော်နိုင်ကြသလို …
ကွမ်းယာအစားများပြီး ကွမ်းဂျိုးတက်နေလျှင် ဒီနေ့တော့ ကွမ်းယာ အစားများတဲ့ အမျိုးတွေ အတွက်ဆေးနည်းလေး တစ်လက် ပြောပြချင်ပါတယ်…။ ကွမ်းယာအစားများပြီး ကွမ်းဂျိုးတက်နေ ပါက အောက်ပါ အတိုင်းပြု လုပ်ပါ။ ပြုလုပ်နည်း ဖရဲသီးမှ အဖြူသား အနည်းငယ် ကိုယူပါ။ ရေ (ရေနွေးကြမ်းခွက်) တစ်ခွက် နှင့်အတူ ဆူပွက်အောင် ပြုတ်လိုက် ပါ ။ ထိုရေကို အနည်းငယ် အအေးထားပြီးသောက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းရှိ ကွမ်းဂျိုးများ ဆီးနှင့် အတူ ပါလာ ပါလိမ့် မည်။ တစ်ပတ်…နှစ်ကြိမ်ခန့် ။ ထိုရေကို ခဏခန့်(၁၀)မိနစ်ခန့် ငုံထားပြီး သွားတိုက် ပါက သွားများရှိ ကွမ်းဂျိုးများပျောက်သွားပါ လိမ့်မည် …
အသားအရေအလှအပအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ မြင်းခွာရွက်
အသားအရေအလှအပအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ မြင်းခွာရွက် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ပေါပေါများများ တွေ့ရတတ်တဲ့ မြင်းခွာရွက်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးတွေ များစွာရှိသလို အသားအရေအလှအပ အတွက်လည်း များစွာ အသုံးတည့်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေး မှာကတော့ မြင်းခွာရွက်ရဲ့ အသားအရေ အလှအပ အတွက် အသုံးဝင် ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။။ (၁) အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေတယ် မြင်းခွာရွက်ဟာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေပြီး အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်တဲ့ Collagen ထုတ်လွှတ် မှုကို မြင့်တက်စေ နိုင်ပါ တယ်။ ကြိတ်ထားတဲ့ မြင်းခွာရွက် အရည်နဲ့ အသားအရေကို လိမ်းကျံပေး တာမျိုးနဲ့ မြင်းခွာရွက်စားသုံးပေးခြင်း တို့က အိုမင်းရင့်ရော်မှုနဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကို တားဆီး …
လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမေ့ရမှာလဲ? ဒီမေးခွန်းက မေရီ့ဆီအမေးများတဲ့ မေးခွန်းထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းမေးထား သူတွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီ ပြန်မဖြေနိုင်လို့ ပေ့ခ်ျမှာပဲ ဖြေပေး လိုက်ပါ မယ်နော်။ ကြိုပြောရမှာက မေရီက အချစ်ရေးမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာမကြီးတော့ မဟုတ် ရပါဘူးနော်။ လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာ လိုက်စားပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးနေရုံ ပါနော်။ အဲတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမေ့ ရမှာလဲ? ပထမဆုံး ပြောချင်တာကတော့ အသက်ရှင်နေသ၍၊ ကိုယ့်မှတ်ဉာဏ်က ကောင်းနေသရွေ့တော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမှ မေ့လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစကားကို ကြားလိုက်ရတော့ အသည်းကွဲလို့ ခံစားနေ ရတဲ့ ကြားထဲက ပိုပြီးတော့တောင် စိတ်ပျက် သွားမိလား? စိတ်မပျက် …
တစ်လမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ရမယ့် ငွေပြည့်ငွေလျှံဂါထာ ဂါထာတွေ မန္တန်တွေဆိုတာ ဟိုးရှေးခေတ်အခါတည်းက ရှိခဲ့တာပါ….တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ ဂါထာတွေကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေရရှိခဲ့တာတွေရှိသလို ထူးခြားမှုတွေ ကြုံရတာလည်း ရှိပါတယ်…မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်း ကုသိုလ်ကံကကောင်း ယုံကြည်စွာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တဲ့ ဂါထာကလည်း အစွမ်းထက်ဆို မိမိအတွက် အလွန့်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေတာပါ… ခုဖော်ပြမဲ့ ဂါထာလေးကတော့ ငွေဝင်ငွေပြည့် ချမ်းသာစေတဲ့ ငွေဝင်ဂါထာလေးပါပဲ…. တစ်လလုံးမှာမှ တစ်ညပဲ ရွတ်ဆိုရတာပါ…..လတစ်လရဲ့ လပြည့်ညရောက်တိုင်း အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ငွေဝင်ဂါထာလေးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးပါ…..ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် တကယ့်ကို ငွေဝင်ငွေလျှံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော်.. (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ …
သိပ်လေးလာရင် လွှတ်ချလိုက်ပါ အဆင်မပြေတာတွေ သိပ်မတွေး ပါနဲ့ အသားကျ သွားရင် နေတတ် သွားမှာပါ မကျေနပ် စရာတွေ သိပ်မတွေး ပါနဲ့ ကျေနပ် စရာလေးနဲ့ ဖြည့်တွေးပေး လိုက်ပါ သူများ အကြောင်းတွေနဲ့ ခေါင်းစား မနေပါနဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းကောင်း ဖို့ သာ ကြိုစားနေလိုက်ပါ မလို သူတွေကြားမှာ အလိုမတူတာတွေ များနေလို့လည်းစိတ်ညစ် မနေပါနဲ့ လိုချင်တာတွေလျှော့လိုက်ရင် အလိုမကျ တာတွေလည်း လျော့သွားပါ လိမ့်မယ် အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်အတွေးပါပဲ ကိုယ့်စိတ်သက်သာ ဖို့အတွက် ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်အမြင်၊ ကိုယ့်ခံယူချက် မှန်အောင်ကြိုးစားဖို့ပါပဲ မလိုအပ်တဲ့ အတွေးတွေကို စိတ်ထဲမှာ အကြာကြီး လက်မခံ ထားပါနဲ့ …